LEGO: Guta rangu Guta 2, kunakidzwa uye zano revana | IPhone nhau
LEGO: Guta rangu Guta 2, kunakidzwa uye zano revana
LEGO: Guta Guta rangu 2 ndiyo yechipiri shanduro yemutambo wekunakidza mutambo uyo LEGO yakatangisa kufadza vadiki, nevaya vasina kunyanya. Nekuda kwemutambo uyu, vakomana nevasikana vachakwanisa kuyedza zano ravo uye hunyanzvi hwekugadzirisa matambudziko nenzira yakanakisa, Kutamba. Icho chikumbiro cheLEGO, icho chinovimbisa mafaro maitiro, sezvo kambani inogara ichirova nzvimbo kana zvasvika pakutandadza vadiki vari mumba. Isu tinokuudza izvo hunhu hwemutambo uyu unoshamisa, kuti iwe uzive maitiro ekurodha pasi uye wotanga kuishandisa pane yako iPhone kana iPad.
Unogona here kuchengeta guta rakarongeka? Sezvatakambotaura, izvi zvichaedza kugona kwevechidiki, pasina kusvika kumatambudziko ekuwedzeredza, saka vanozogara vakavaraidzwa vachikwidziridza hunyanzvi hwavo munzvimbo idzi. Aya ndiwo maratidziro anoita LEGO pachayo paIOS App Store.
Ziva kunakidzwa kweLEGO® Guta uye ita kuti zuva racho rinakidze!
Tora kuenda kumigwagwa, matenga kana gungwa uye rega fungidziro yako imhanye semusango iwe paunovaka mota dzinotonhorera kuti upedze misheni ine njodzi.
Shandisa zvisikwa zvako zvinoshamisa kudzima moto, kubata mbavha uye kuongorora nzvimbo dzine njodzi senge gomo.
Pedzisa Magamba Madambudziko ekuwana zvitsva zvemotokari uye zvikamu zveLEGO® uye tarisa guta rako kukura sezvaunokwira kumusoro
Guta rako reLEGO® rinokuda.
Gadzira uye gadzirisa yako wega mota kuti dzienderane nekufungidzira kwako uye uzviise pakuedzwa muLEGO® Guta!
• Vaka guta rako pachako, uchipedzisa magamba mamishini.
• Tamba nemotokari diki dzeLEGO® City.
• Nhanho kumusoro kuti uwane zvitsva zvemotokari zvikamu uye LEGO zvidimbu.
Mutambo uyu wakasununguka zvachose uye hauna zvigadzirwa zvakabatanidzwa, zvakagadzirirwawo vana vari pakati pemakore matanhatu kusvika masere ekuberekwa, asi hushoma hwemana. Inorema 160MB uye mutambo weUniversal, kune chero chishandiso cheIOS chine iOS vhezheni 8.0 zvichienda mberi. Uri kumirirei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » LEGO: Guta rangu Guta 2, kunakidzwa uye zano revana